foodpanda | ရန်ကုန်မြို့တွင်း မြန်ဆန် လွယ်ကူတဲ့ အစားအသောက် ပို့ဆောင်ရေး
သင့်လုပ်ငန်းကို foodpanda မှာ စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ!
မက်ဆေ့ချ်မရရှိခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ စားသုံးသူဝန်ဆောင်မှုထံ ဆက်သွယ်ပါ။
ဝမ်းနည်းပါတယ်။ ဤအော်ဒါကို လက်ရှိအချိန်မှာ ပြန်လည်မှာယူ၍ မရပါ။ ထပ်မံကြိုးစားပါ။
သင်သည် လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို အောင်မြင်စွာ သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ယခု ဝင်ရောက်နိုင်ပါပြီ။
သင်ကြိုက်တဲ့ အစားအသောက်နှင့် ကုန်စုံပစ္စည်းများကို မှာယူလိုက်ပါ။
သင့်စားသောက်ဆိုင် သို့မဟုတ် ဆိုင်ကို foodpanda မှာ စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ
သန်းပေါင်းများစွာသော စားသုံးသူအသစ်တွေကို သင့်ရဲ့ ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ အစားအသောက်နဲ့ ကုန်စုံပစ္စည်းတွေ ရောက်ရှိစေချင်လား? ကျွန်ုပ်တို့ကလည်း သင်နဲ့ထပ်တူပါပဲ။ ရိုးရှင်းပါတယ် : ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ရဲ့ အစားအသောက်နဲ့ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းကို အွန်လိုင်းမှာ တင်ပေးမယ်၊ အော်ဒါတွေရလာတဲ့အခါ သင့်ဆီအရောက် လာယူပေးပြီး ဗိုက်ဆာနေတဲ့ ပန်ဒါလေးတွေဆီ ပို့ပေးမယ် - လျှပ်တစ်ပြက်ပဲ ကြာမယ်နော်!
မြို့များ ဤမြို့များတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုရှာပါ။
App သင့်အိတ်ကပ်ထဲသာ ထည့်ထားပါ။
သင်နှစ်သက်တဲ့ စားစရာနဲ့ ကုန်စုံပစ္စည်းတွေမှာဖို့ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်ပါ။
သင်ကြိုက်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်များနှင့် ကုန်ပစ္စည်းဆိုင်တွေက သင့်လက်တစ်ကမ်းမှာပါပဲ။ foodpanda အက်ပ်ဖြင့် သင်ကြိုက်တဲ့ အစားအသောက် (သို့) ကုန်စုံပစ္စည်းကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ အခုပဲ ‌အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
foodpanda Myanmar မှာရှိတဲ့ အကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းဆိုင်တွေဆီကနေ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် မှာယူလိုက်ပါ
ဗိုက်ဆာနေလား? တစ်နေ့လုံး အလုပ်တွေများပြီး ပင်ပန်းနေတာလား? သင် နေရာမှန်ကို ရောက်လာတာပဲ။ foodpanda က သင့်နားမှာရှိတဲ့ အကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်နဲ့ လုပ်ငန်းတွေဆီက အစားအသောက်တွေနဲ့ ကုန်စုံတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီ။ ပီဇာလား၊ ဘာဂါလား၊ ဂျပန်စာစားချင်တာလား (သို့) အပတ်စဉ်ဈေးဝယ်သွားနေရတာကို ရှောင်ရှားချင်တာလား? foodpanda က မြန်မာနိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်များနှင့် ထိပ်တန်းကုန်ပစ္စည်းဆိုင်တွေဆီကနေ ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီ။ ကြေးအိုးလေး တောင့်တနေလား? အရသာအရမ်းရှိတဲ့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲတစ်ပွဲနဲ့ ဘဲကင် ဆိုရင်ရော? ကျွန်ုပ်တို့ဆီမှာ ရန်ကုန်မှာရနိုင်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်အများကြီးရှိတဲ့အတွက် သင် အွန်လိုင်းက မှာလိုက်ရုံနဲ့ သင်ရှိတဲ့နေရာကို အရောက်ပို့ဆောင်ပေးမှာပါ။
ဘာကြောင့် foodpanda ကနေမှာသင့်တာလဲ?
✓အစားအသောက်အမျိုးအစားများစွာနဲ့အတူ စားသောက်ဆိုင်ကောင်းတွေ ရှိတယ်။
✓အွန်လိုင်းကနေ ကုန်စုံတွေမှာနိုင်ပြီး အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
✓အဆင့်မီတဲ့ အစားအသောက်ပို့ဆောင်မှုမျိုး ရတယ်။
✓သင်လိုအပ်တဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ ချက်ချင်းကူညီပေးဖို့ Live chat ရှိတယ်။
အစားအသာက်အမျိုးအစားများစွာထဲက ရွေးချယ်ပြီး အိမ်အရောက်ပို့ပေးမယ့် အွန်လိုင်းကနေ မှာစားလိုက်ပါ။
foodpanda Myanmar မှာဆိုရင် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးအစားအသောက်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုရဖို့ သေချာပါတယ်။ အသားကင်၊ ဆူရှီ၊ ကြက်ဆီထမင်း၊ လာအိုအသားသုပ်၊ ဗီယက်နမ်ဝက်အူချောင်းကင် (သို့) ခေါက်ဆွဲပြုတ်တွေကစပြီး foodpanda မှာ သင့်အတွက် ရှိနေပြီနော်။ KAMU ၊ Hom Coffee ၊ Comma Coffee ၊ Kaogee နဲ့ Senglao Cafe ကနေ ကော်ဖီမှာသောက်လို့လည်းရတယ်။ Le Padaek မှာ မိသားစုအစားအသောက်များနဲ့ Once UponaTime ကဖေးမှာ အာရှအစားအစာမျိုးစုံကို မှာယူသုံးဆောင်လိုက်ပါ။
foodpanda အက်ပ်ကနေ ဘယ်လို မှာစားကြမလဲ။
foodpanda ကနေဆိုရင် ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဘယ်နေရာကမဆို ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် မှာစားလို့ရပါတယ်။ အွန်လိုင်းကနေ မှာစားတာက ရိုးရှင်းတယ်၊ မြန်ဆန်တယ်၊ အဆင်ပြေတယ်လေ။ သင်ရှိနေတဲ့နေရာကို ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် သင့်အနီးနားမှာရှိတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေကို ပြပေးမှာပါ။ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ စားသောက်ဆိုင်စာရင်းထဲက သင်ကြိုက်တဲ့ ဆိုင်ကို ရွေးလို့လည်းရသလို သင်စားချင်တဲ့ အစားအသောက်အမျိုးအစားကို ‌ရွေးချယ်ပြီးလည်း စားသောက်ဆိုင်ရှာလို့ရပါတယ်။
စားသောက်ဆိုင်ရွေးပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ဆိုင်ရဲ့အစားအသောက်စာရင်းကို ကြည့်ပြီး အဆာပြေလား၊ ဟင်းပွဲလား၊ အချိုပွဲလား ဒါ့အပြင် သောက်စရာလားရွေးပြီး သင့်ရဲ့ အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းထဲ ထည့်ပါ အားလုံးပြီးလို့ ငွေရှင်းပြီးပြီဆိုရင် သင့်အော်ဒါကို ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပြီး သင်ရှိတဲ့နေရာကို ချက်ချင်းပို့ဆောင်ပေးမှာပါ။
foodpanda နဲ့ လက်တွဲချင်ပါသလား?
သင့်ဆိုင်ကို foodpanda Myanmar မှာ အခုပဲ စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ foodpand ရဲ့ မိတ်ဖတ်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ စားသုံးသူ များစွာဆီ ရောက်ရှိပြီး သင့်လုပ်ငန်းကို ချဲ့ထွင်လိုက်ပါ
ပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ယူဆောင်ခြင်းက ဘာကွာခြားပါသလဲ?
သင်က ပို့ဆောင်ခြင်းကို ရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုရင် foodpanda ပို့ဆောင်သူက မှာယူထား‌တဲ့ စားသောက်ဆိုင်က သင့်အော်ဒါကို သွား‌ရောက်ယူဆောင်ပြီး ရွေးချယ်ထားတဲ့လိပ်စာဆီ ပို့ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်က ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ယူဆောင်ခြင်းကို ‌ရွေးချယ်ထားမယ်ဆိုရင် စားသောက်ဆိုင်က သင့်အော်ဒါကို သင်ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ယူဆောင်ပြီး ဝန်ဆောင်ခတွေ ချွေတာနိုင်သလို တန်းစီစရာလည်းမလိုတော့ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ယူဆောင်သည့်အော်ဒါများကို စားသောက်ဆိုင်များတွင်သာ ရရှိနိုင်ပါသည်။